Fehin-kevitry ny Vovonana 2002
Vovonana Faharoa MFM Taonarivo Fahatelo
" Madagasikara : Manangana fanjakana tan-dalàna manome hasina ny fahamarinana.
Fanjakana tan-dalàna miantoka ny handrosoana amin'ny lalam-bola sy lalam-barotra vaovao."
ANTANETIBE - IVATO 21, 22, 23 Aogositra
- Fanjakana tan-dalàna miantoka ny handrosoana amin'ny lalam-bola sy lalam-barotra vaovao.
- Madagasikara : manangana fanjakana tan-dalàna manome hasina ny fahamarinana..
A - VAOMIERAN'NY TOEKARENA, SOSIALY
Ireo no loha-hevitra nanankinan'ny VOVONANA MFM nivory teto Antanetibe, Ivato, handinihana ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Hiroso hanangana Fanjakana tan-dalàna manaja ny Fahamarinana hitondra ny fampandrosoana haingana ny Fitondram-panjakana ankehitriny.
Mitaky fanovana sy fiovan'ny fomba fitondrana ny raharam-panjakana izany foto-kevitra izany.
Antoko mitondra ny fanovana eto amin'ny firenena ny MFM, ka ny hevitra nodinihana sy notapahana teto amin'ny Vovonana ny 21,22,23 Aogositra 2002 ity, dia heverin'ny MFM fa hitondra fomba fisainana vaovao hiteraka fanovana sy fiovana eo amin'ny fitondrana ny raharaham-pirenena.
- Lalampanorenana manome vahana tanteraka ny Filohan'ny Repoblika eo amin'ny fitondrana ny raharaham-panjakana ity lalampanorenantsika ity. Miankina amin'ny Filoham-pirenena avokoa ny raharaham-panjakana. Angady tsy mahatampaka ahitra, fa mpanasina ny fahefana mpanatanteraka fotsiny ny olom-boafidy ao amin'ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona.
Tsy maintsy ahitsy io lalampanorenana io, mba hisian'ny fifandanjam-pahefana samy hafa : (fahefana mpanantanteraka, fahefana mpanao lalàna, fahefana mpitsara).
- Ny hosoka tamin'ny fifidianana no fototra miteraka ny adilahy politika, ka miafara amin'ny korontana sy ny fahasahiranana iainantsika amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy hodinihana amin'ny antsipiriany ny fomba fanatanterahana ny fifidianana eto amintsika : lalam-pifidianana, fikarakarana ny fandatsaham-bato, fitantanana ny vokam-pifidianana, sns…
Tsy maintsy iarahan'ny olom-pirenena malagasy amin'ny alalan'ny fiaraha-midinika sy ny fikaonan-doha ny fanatanterahana an'ireo fanovana ireo.
Ny antoko MFM dia manana hevi-baventy arosony avy hatrany eo amin'ny fitantanana ny lafi-tany izay heveriny fa hiteraka fandrosoana haingana mifandanja ary maharitra hitovian'ny Faritra samihafa eto amin'ny firenena.
Ny fametrahana ny Faritra (région ) ho ambaratonga handraisana fanampaha-kevitra no hampahomby ny asa fampandrosoana haingana sy maharitra ary mirindra eto Madagasikara.
Atsangana ny cellule de pilotage autonome isaky ny faritra
Lavitra ny vahoaka ny ambaratongam-panjakana mpanampa-kevitra sy mpitantana ny vola ka tsy tafapaka any ifotony ny tetika fampandrosoana rehetra. Ny fanatonan'ny fahefana manampakevitra sy ny mpitantam-bola akaikin'ny vahoaka no hiteraka fampandrosoana.
Efa manaraka ny firafitry ny faritra eto amintsika ny sasantsasany amin'ny sampan-draharaham-panjakana ankehitriny.oh: ny fambolena sy ny fiompiana.
Apoitra isaky ny Faritra ireo tetikasa sy fananganana foto-drafitr'asa lehibe izay ifampiraharahana amin'ireo firenen-dehibe sy ny mpamatsy vola ny fanatanterahana azy
oh : lalamby mamakivaky eran'i Madagasikara miainga any Antsiranana ka hatrany Taolanaro, mandalo amin'ny faritra misy haren a ambanin'ny tany (vallée des mines), mandalo toeram-pitsangatsanganana (any any Morondava ka hatrany Manakara), fanamboarana seranan-tsambo (port Marohita anelanelan'i Mananjary sy Manakara), fanatsarana ny fitanterana an-dranomamy sy an-dranomasina.
Ireto no tetika hodinihana sy hatevenine isaky ny cellule de pilotage ao amin'ny Faritra tsirairay
Fiharian-karena sy fandraharahana
- Fahafantarana ireo karazana famatsiam-bola misy eto Madagasikara
- Hatsaraina ny fampiasam-bola eto Madagasikara
- Fanatevenana ny fiaraha-miasa amin'ny partenariat
- Fanatrarana ny fem-potoana voatondro handaniana ny vola avy amin'ny bailleurs de fond
- Fampiakarana ambony ny fahefa-mampiasa vola (capacité de décaissement) mba ahazoana mampandroso haingana an'i Madagasikara.
- Fananganana sy fahaiza-mitantana entreprises, société, bureau d'étude, ONG, associations, groupement.
- Fanamafisana sy fanatsarana ny fiarahana amin'ny mpiara-miombona antoka (renforcement de partenariat : respect, régularité, transparence)
- Fehezina ny lalam-bola sy ny lalam-barotra efa misy
- Famolahana ny tetim-pitantanana : drafitr'asa manainga ny toe-karena (plan de relance économique, manangana base de donnée lalambola, lalambarotra, mpandraharaha)
- Itarina sy hatsaraina ny circuit d'information sy ny fampiofanana.
- Ezahana fehezina ny fandratovana ireo tahirin-kevitra (documentation) sy ny tranonkalam-pifandraisana eran-tany (réseau d'information)
- Fanamafisana ny fanabeazam-boho ny fahaiza-manao (renforcement de capacité) hahazoana mamorona tetikasa hahazoam-bola hanatsarana ny fiainan'ny mpiara-belona.
- Atosika ireo misahana sehatr'asa fampandrosoana acteur de développement hifampidinika amin'ireo coordonateur de projet (Ministère), mba hampahomby ny fampiasam-bola mitondra fandrosoana haingana, mirindra, maharitra.
- Atosika izay rehetra manana sehatra ao amin'ny fihariana mba hifampifehy amin'ny fananganana ny chambra de métier chambre de commerce, maison de l'agriculture, ect…...
- Fampivoarana ny enti-manana amin'ny fambolena (industrialisation de l'agriculture)
- Omanina ny mpandraharaha malagasy hahay hampiasa ireo fitaovana vaventy ampiasaina amin'ny fambolena sy ny fanaovan-dàlana.
- Amporisihina ny fifanan-kalozan-kevitra eo amin'ny manam-pahaizana sy ny mpandraharaha eny amin'ny Faritra ; oh : Mandray vahiny Mahajanga – Donak'afon'ny Faritra Mangoro – Tambatra Fianarantsoa.
- Ampitoviana sy hamoraina ireo fepetra sy fenitra takian'ny tetikasa.
- Fampidirana ny vehivavy ao anatin'ny sehatra asa sosialy sy toekarena hanamora ny fahazoana famatsiam-bola avy amin'ny mpamatsy vola ( 30 ka ahatramin'ny 40% amporisihina mba ho vehivavy)
- Omena tombon-dahiny ny vehivavy amin'ny fampiasana ny micro-crédit
- Mandray anjara mivantana amin'ny identification AGR sy micro-projet.
- Raisina ho mpampianatra raikitra ireo nanao vacataires sy contractuels
- Apetraka amin'ny farim-pahaiezany sy ny traikefany ny mpasa tsirairay.
- Fanatsarana ny recyclage.
- Fanofanana ireo mpampianatra amin'ny fanabeazana fototra ary isam-paritra.
Momba ny fananan-tany
Ilaina ho maty paika ny rafitra mifehy ny fitantanana ny fananan-tany eto Madagasikara
- Mitaky fepetra mazava momba ny fananan-tany ireo mpampiasa vola te hanangana zavatra eto amintsika.
- Ireo mpiasantany mamboly amin'ny faritra midadasika, manana tetik'asa fanitarana ka mifampiraharaha amin'ny mpamatsy vola momba izany, dia itakiana titre foncier.
- Mitarika fandriam-pahalemana eo amin'ny isam-paritra ny fahazavan'ny fandaminana ny fananan-tany.
- Tokony hifarimbona amin'ny fametrahana io rafitra maty paika io ny Fanjakana foibe, ny Solombavambahoaka ary ny Tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratongany
Momba ny Fandriam-pahalemana
Tsy hisy fandrosoana mitohy sy mahomby raha tsy misy fandriam-pahalemana. Entanina ny Fanjakana foibe hampita ny hoenti-manana izay efa atomboka any Fianarantsoa.
Famatsiana ny sora-bola sy fandefasana ny hélicoptère hiatrehana ny asan-dahalo sy ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika.
Arindra hisy hetsika famerenana ny fandriampahalemana amin'ny Faritra samihafa eran'I Madagasikara.
Momba ny Fambolena sy Fiompiana
Hampirindra ny fampivoarana ny fambolena sy fiompiana ho azo ampiasaina fitaovana vaventy, dia tohizana sy hatsaraina ny fanamboarana foto-drafitr'asa eny ambanivohitra.
Oh : Toho-drano hanondrahana tanimbary sy hamatsiana jiro.
Raisina ho fomba fisainana sy iainana ny mamokatra entana, vokatra ahitana lalam-barotra lehibe (agro-business)
Oh : hamokatra sakamalao 50 000 T izay ilain'ny amerikana.
Mba hampaharitra ny asa fampandrosoana dia ampivadiana hatrany ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny velon-tena .
Izay kaominina mbola mandoro tanety sy manao tavy ary manapotika ny harena voajanahary dia tsy mahazo famatsiam-bola amin'ny tetik'asa atolony.
Lasa sehatra fanodikodinam-bola hoan'ireo namana akaiky ny mpitondra Fanjakana ny caisse de stabilisation ny vanille tamin'ny alalan'ny indemnité de stockage ka noteren'ny mpamatsy vola mpanampy antsika nofoanana sady tsy maintsy misitaka miala amin'ny sehatra famokarana rahateo ny Fanjakana.
- Tokony mbola haorina ny Groupement National des Préparateurs sy ny Groupement National des Planteurs de la Vanille . Ny fitambaran'ireo telo ireo no lasa Interprofessionel de la Vanille izay hamoronana ny Caisse de péréquation karazana Chambra Interprofessionelle de la Vanille.
Miezaka hampitombo hatrany ny vanila malagasy aondrana ho any ivelany no andraikitra apetraka amin'ny chambre Interprofessionelie de la Vanille. Mbola tsy misy anefa ny chambre satria mbola tsy vita ny famondronana ny mpamboly sy ny préparation, ka lasa ny GNFV irery no misahana ny raharahan'ny vanila manontolo.
Tamin'ity taona ity dia nitotongana ny vidin'ny vanila satria tsy manome crédit hividianana ny banky, satria matahotra sao ratsy ny kalitaon'ny vanila amin'ity taona ity nohon'ny fandehan'ny raharaha politika teto amin'ny firenena.
Ka miteraka tahotra koa teo amin'ny mpamboly ka nahatonga ny maro tamin'izy ireo hioty ny vanila na mbola tsy matoa tsara.
Fihenan'ny fahatsaran'ny vanila no aterak'izany, ka nampihemotra ny banky tsy hanome vola orinasa maro sady betsaka koa ny tsy nahaverim-bola notrosaina .
- Atao maty paika ny rafitra hahazoan'ny besinimaro fitsaboana sahaza azy.
- Alefahana kokoa ny saram-pitsaboana any amin'ny toeram-pitsaboana sahanin'ny Fanjakana
- Aparitaka ny fivarotam-panafody iraisana mba hahenika ny firenena manontolo (PHACOM).
- Aparitaka hahenika ny Faritra rehetra ny mpitsabo.
- Hofehezina hitondra fampivoarana amin'ny fitaovam-pitsaboana moderina sy mahenika ny Faritra rehetra ny CRESAN.
B - VAOMIERA POLITIKA
1- NY REGIONS AUTONOMES
Ny fitondram-panjakana miorina eto Madagasikara dia iarahan'ny vahoaka mahafantatra fa Fanjakana nolovaina tamin'ny mpanjanantany. Fantantsika fa tamin'ny loi cadre 1956 no namaritana an'i Madagasikara ho faritany enina, ka io no rafitra mbola lovaintsika ahatramin'izao . Manoloana ireo tolom-bahoaka izay nifanesy teto Madagasikara ka ahatramin'ny taona 1970 ka ahatramin'izao taona 2002 izao, dia mahatsampa ny mpikambana MFM, izay nivory tato anatin'ny VOVONANA izay natao nandritry ny 21, 22, 23 Aogositra 2002 fa misy fifandraisany amin'ny olana misy eto Madagasikara ny fizaram-paritra mifototra amin'ny faritany enina.
Ny VOVONANA MFM dia manatitratitra fa ny Fanjakana mifototra amin'ny faritany enina dia efa lany andro nanomboka tamin'ny taona 1980 ka tsy tokony hampiharina intsony amin'izao taona arivo fahatelo izao noho ireto antony manaraka ireto.
Voalohany indrindra, ny mponina dia efa nitombo avo folo heny raha ampitahaina tamin'ny fotoana nametrahana azy ; ny foto-drafitr'asa toy ny lalana, jiro, rano, biraom-panjakana isan-karazany, sns…dia mijanona eny amin'ny renivohim-paritany sy ireo tanan-dehibe. Ankoatr'izany ireo faritany enina dia tena midadasika anefa tsy afaka mifandray ireo tanàna manodidina nohon'ny tsy fisian'ny lalana. Ny fahantran'ny vahoaka indrindra eny ambanivohitra noho ny faharatsian'ny antom-pivelomany dia mitarika fifindran'ny mponona hamonjy ny renivohim-paritany izay toerana heverina fa mety hahitàna asa fivelomana. Vokany feno hipoka ny tanànan'Antananarivo ka nitarika ny fahasimban'ny tontolo iainana. Koa raha tsy miova malaky izao rafitra izao dia hitohy ny fahasimbana ka hihanaka amin'ny faritany dimy hafa.
Eo amin'ny lafiny ara-toe-karena, na dia mba misy aza ny famatsiam-bola hoan'ny tontolo ambanivohitra dia tsy tafapaka any amin'ireo tantsaha ireny tetik'asa ireny nohon'ny halaviran-tany izay tsy maintsy ataon'ny olona eo amin'ny famenoana ny antotan-taratasy takian'ny tetik'asa, vokany, tsy lanin'ny Fitondram-panjakana akory ny famatsiam-bola hoentina hampandrosoana an'i Madagasikara.
Noho ireo antony voalaza etsy ambony ireo dia takian'ny VOVONANA MFM ny fametrahana ao anatin'ny fotoana fohy ny Régions Autonomes .mba hahafahana hiroso kokoa amin'ny fampandrosoana haingana an'i Madagasikara. Ireo Régions Autonomes ireo mantsy no heverina ho pôle de développement économique vaovao, ka hanana fahefana feno eo amin'ny fandraisana fanampahan-kevitra ara-politika sy ara-toekarena. Amin'izao taonjato iainantsika izao mantsy, manoloana ny fanatontoloana ny toekarena dia heverina fa tsy maintsy hampanantonina ny mponina sy ny toerana hamokarana ny fandrosoana sy ny fanampahan-kevitra.
Eo amin'ny lafiny fitantanana ny asam-panjakana dia manamora ny fanaraha-maso ny asam-panjakana, satria ho mora amin'ny vahoaka ny mitsara ny asa ataon'ny mpiasam-panjakana.
Fehiny, ny fametrahana ireo Régions Autonomes ireo no heverin'ny VOVONANA MFM fa dingana iray tsy azo ihodivirana amin'ny fampandrosoana an'I Madagasikara.
2 - NY LALANA MIFEHY NY ANTOKO POLITIKA
Ny Tolom-bahoaka tamin'ny taona 1991 dia nitaky ny fahalalahana amin'ny fanaovana politika teto Madagasikara. Tsy voalanjalanja ny fanomezan-dalana amin'ny fananganana antoko. Nanangana antoko politika ny sokajin'olona maro te hitondra fanjakana eto amin'ny firenena. Ankehitriny dia misy antoko politika 150 eto amintsika. Tsampa anefa fa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahasahana akory ny isan'ny kaominina ao anaty Fivondronampokotany iray. Ny sasany aza dia miendrika fikambanam-pianankaviana mihintsy. Ny fototry ny fandraisana fahefana amin'ny ara-dalana dia ny fifidianana, izany no heverina fa andraikitra lehibe tsy maintsy ataon'ny mpanao politika. Ankoatr'izany dia manana adidy lehibe amin'ny fanabeazana ny vahoaka ary fampandrosoanan ny firenena. Tokony ho matihanina ny fanaovana politika mba hisy fahombiazana ny fitondrana ny firenena fa tsy mitera-bokantsoa ny fitondram-panjakana azo amin'ny kisendrasendra tahaka ny fanjakana maro nifandimby teto Madagasikara.
- Tsy mety ihany koa ny fanaovana politika miovaova loko, izay tsy misy fotokevitra mazava amin'ny fomba hitondrany fanjakana.
- Etsy ankilany tsy vitsy ny olom-pirenena malagasy no milatsaka ho fidina amin'ny anaran'ny tenany, amin'ny toeran'ny olom-boafidy toy ny solombavambahoaka na ben'ny tanana sns…
- Tsy mitera-bokantsoa anefa izy ireo no sady tsy mijanona ho indépendant araka ny filatsaha-kofidina nataony. Lasa manaraka loko politika matanjaka ao amin'ny antenimieram-pirenena, izany no niteraka ny géométrie variable izay maro ny fanakianana azo avy amin'ny vahoaka.
Noho izany, tsy voafaritra mazava tsara ny sokajy ny mpanohana na ny mpanohitra ny fanjakana : Vokany lasa sehatra fitadiavana tombontsoa fotsiny ny fanaovana politika eto Madagasikara ka lasa miteraka fatiantoka hoan'ny firenana. Eo anatrehan'izany dia nanapaka ny VOVONANA MFM :
- Tokony hisy famaritana mazava ny antoko politika afaka miasa eto Madagasikara.
- Tokony hisy volavolan-dalàna amin'ny famatsiam-bolan'ny antoko politika.
- Ny fananana olom-boafidy ao amin'ny Antenimierampirenena no amaritana ny famatsiam-bola ny antoko politika.
- Omena lanjany ny isam-bato azon'ny antoko politika eo amin'ny fifidianana isan'ambaratongany.
- Hamafisina ny lalàna efa misy momba ny famerenan'ny Fanjakana ny vola lanin'ny kandidà nahazo ny 10% ny vato manan-kery.
- Faritana mazava ny fampiasana ny vola omen'ny fanjakana ny antoko politika.
- Tsy azo atao ny fampiasana ny fahefam-panjakana hoentina hamatsiam-bola ny antokon'ny tena.( Oh : Minisitra maka 10% amin'ny marché public ataon'ny entreprise.)
- Ny tsy fanajàna ny lalàna dia miteraka sazy na fanafoanana ny antoko.
- Ankoatry ny latsakemboka sy ny fidirambolan'ny antoko dia tsy azo atao ny mampiasa ny volan'ny orinasa 'société na entreprise amin'ny fifidianana satria miteraka halatra
- Tsy maintsy manana karatra amin'ny maha mpikambana azy ny tsirairay.